Cuckold – alanlaymyar
“နင့်ဟာကြီးကလည်း ကြည့်ပါဦး တောင်နေတာမာပြီးရှည်တယ်” ပန်းခြံထဲ၌ပုံ့ပုံကမြင့်အောင်၏ လီးတံကြီးကိုဆော့ကစားရင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ပုံ့ပုံ့နှင့်မြင့်အောင်မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပြီးမတ်ဆင်ဂျာ၌ ပုံ့ပုံ့တောင်းဆိုလို့ဖြစ်စေ မြင့်အောင်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စေ အောကားတွေ အောအကြောင်းတွေအပြန်အလှန်ပြောဆိုရလောက်အောင်ခင်မင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ပုံ့ပုံ့မှာလင်ရှိမယားဖြစ်ပြီးမြင့်အောင်မှာ လူလွတ်ဖြစ်သည်။နှစ်ယောက်လုံး၃၂ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးမြင့်အောင်ကလပိုင်းငယ်သည်။ပုံ့ပုံ့မှာလင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားမရတိုင်းမြင့်အောင်ကိုအကြံတောင်းကြည့်ရင်းမြင့်အောင်လည်းသူသိသောဆေးဝါးတွေအပြုအစုတွေပြောပြတတ်၏။နောက်ဆုံးအဆင်မပြေမှသူကြည့်ဖူးသောcuckoldကားတွေထဲကလိုhotwifeသဘောတရားတွေပြောပြပေးလိုက်သည်။ “နင့်ယောကျာ်းကိုစည်းရုံးတာအဆင်ပြေသွားပြီလား” “အင်းပြေလို့ ခုလိုနင်နဲ့လာတွေ့တာပေါ့” “တော်တော်စည်းရုံးလိုက်ရမှာပေါ့” “မဟုတ်ပါဘူး။သူက ပန်းညိုးနေတာကော လုပ်တိုင်းလည်းငါကကောင်းကောင်းမခံစားရသေးခင်သူပြီးနေပြီဖြစ်နေတာကော ကိုနင်ပြောသလိုပြောကြည့်တာပေါ့ ဆန္ဒမပြည့်တာကြာလာရင် ငါလည်းသူကပ်တာခံချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး သူမသိအောင်လည်းလုပ်ချင်လုပ်မိမှာ အဲ့တော့သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြ တစ်ခါတစ်လေ ဆန္ဒအရ သူစိမ်းယောကျာ်းနဲ့ဆက်ဆံမိပေမယ့်သူ့အပေါ်မှာအချစ်လျော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်း သူလည်းဆန္ဒအရခရီးသွားရင်းတခြားကောင်တွေနဲ့ပလူးမိတာကိုလည်းငါကနားလည်ပေးတဲ့အကြောင်း ညှိယူရတာပေါ့” “အင်း…သူကောဘာပြန်ပြောလဲ” “သူ့ကြောင့်ငါဆန္ဒမပြည့်တာတွေကိုနားလည်ပေးပါတယ်တဲ့။သူ့အပေါ်အချစ်မလျော့ရင်လည်းကျေနပ်ပါတယ်တဲ့။သူ့နောက်ကွယ်မှာမဖောက်ပြန်ပဲခုလိုသူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသဘောထားတောင်းခံတာကျေနပ်ပါတယ်တဲ့။တစ်ခါတစ်လေမိန်းမဆန္ဒရှိလို့စိတ်ချရသူဆိုကိုယ်ခွင့်ပြုပါတယ်တဲ့” “အင်း နင့်ယောကျာ်းကသဘောထားကြီးပြီးနင့်ကိုအရမ်းချစ်လို့ခုလိုနားလည်ပေးနိုင်တာနေမယ်” “အင်း…ဟုတ်မယ်….အယ်…ကြည့်ပါဦးနင့်ဟာကြီးက ပိုမာလာပြီးအရည်ကြည်တောင်ထွက်နေပြီ” “နင့်လက်လေးတွေကနူးညံပြီးပွတ်သပ်နေတာအရမ်းခံလို့ကောင်းတာကိုး…။နင့်နို့ကြီးတွေကလည်းအကြီးကြီးပဲ နင့်ယောကျာ်း အပီကိုနယ်ဖတ်ထားမှာပဲ” “အင်း” “နင့်နို့ကြီးတွေငါကိုင်ကြည့်မယ်နော်” “ကိုင်လေ” ပုံ့ပုံ့လည်းရင်ဖုံးကြယ်သီးလေးတွေဖြုတ်ပေးလိုက်သောအခါ ဘရာစီယာအောက်၌မို့မောက်ဖုထစ်နေသောနို့အုံကြီးကိုမြင့်အောင်ကအငမ်းမရငုံ့ကြည့်ပြီးသူ့လက်ဝါးကြီးဖြင့်အုပ်ကိုင်ကာဖွဖွလေးဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ချေလိုက်သည်။ “အား….ငါ့စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးပဲမြင့်အောင်ရယ်…” “ဖီလင်တက်လာပြီလား” “အင်း” မြင့်အောင်လည်းပုံ့ပုံ့၏ပါးလေးကိုရွှတ်ခနဲနမ်းလိုက်ပြီးပုံ့ပုံ့၏ခေါင်းကိုသူ့ဖက်အသာအယာဆွဲလှည့်လိုက်သည်။ပုံ့ပုံ့လည်းအလိုက်သင့်လှည့်ပေးပြီးမျက်လုံးလေးပိတ်ထားလိုက်သည်။မြင့်အောင်လည်းပုံ့ပုံ့အိအိစက်နူးညံသောနှုတ်ခမ်းလေးပေါ်အကြင်နာအနမ်းလေးတွေတပြွတ်ပြွတ်ပေးရင်းနို့အုံကြီးကိုဆုပ်နယ်ပေးလိုက်သည်။ပုံ့ပုံ့လည်းအလိုက်တသိပင် မြင့်အောင်၏လီးတံကြီးကိုပွတ်သပ်ဆော့ကစားရင်းဂွင်းထုပေးလေသည်။ “အု..အူး…ကောင်းလိုက်တာပုံ့ပုံ့ရာ…ငါမနေနိုင်တော့ဘူး ဒီနားကဟော်တယ်တခုခုသွားရအောင်” “အင်း..သွားလေ” ##### ဟော်တယ်ခန်းထဲရောက်သောအခါ…. “နင်ခနစောင့်ဦး..ငါအိုက်လို့ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်” ဟပုံ့ပုံ့ကပြောပြီးအဝတ်အစားလဲကာရေချိုးတဘက်လေးဖြင့်ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားသည်။မြင့်အောင်လည်းရေခဲသေတ္တာထဲမှဘီယာတစ်ဗူးထုတ်သောက်ရင်းဖုန်းထဲမှာ wife with […]
*** မျက်ကွယ် ****
*** မျက်ကွယ် **** ( Hotwife , Husband , ) ကိုတိုးနှင့်စိုးစိုးသည်ချစ်သူသက်တမ်း ၃ နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်သောချစ်သူများ ဖြစ်ကြလေသည်။တက္ကသိုလ်မှာကတည်းကချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီး ယခုတော့ကိုတိုးသည်အသင့်အတင့်အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လာပြီးစိုးစိုးကတော့ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် စူပါဗိုက်ဆာဖြစ် လာခဲ့လေပြီ။သူတို့နှစ်ဦးသည် တပါတ်တစ်ခါမှန်မှန်တွေ့ဖြစ်ကြပါသည်။ကိုတိုးကအဆင်ပြေသောလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ကား လေးတစ်စီးဝယ်ထားနိုင်သောကြောင့်စိုးစိုး၏ရုံးပိတ်ရက်တနင်္ဂနွေတွင် ကားလေးဖြင့်လာခေါ်ပြီးတစ်နေရာသို့သွားစားသောက်ကြသည်။ပြီး လျင်ဟော်တယ်သွားချစ်တင်းနှီးနှောကြသည်။တကယ်တော့ချစ်သူဖြစ် ပြီး ၆ လအကြာတွင်စတင်၍လိင်ဆက်ဆံဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဘက်မိဘများကလည်းသိထားပြီးဖြစ်သည်မို့ပြဿနာလည်းမရှိခဲ့ပါ။ ကိုတိုးတစ်ယောက်ဒီထက်ပိုပြီးစုမိဆောင်းမိရှိလျင်လက်ထပ်ကြမည် ဆိုတာကသေချာနေသဖြင့်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်းမရှိပါ။ သူတို့နှစ်ဦးသည် တခါတရံဟော်တယ်တွင်၎င်း တခါတရံလူရှင်းလျင်ကိုတိုးးအိမ်တွင်၎င်း ချစ်တင်းနှောဖြစ်ကြလေသည်။ စိုးစ်ုးသည်အပျိုစင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးကိုတိုးနှင့်ပထမအကြိမ်လိုင်ဆက်ဆံ တော့မှသာ ပါကင်အဖွင့်ခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။သူတို့နှစ်ဦးစတင်ဆက်ဆံ ဖြစ်သွားသည်ကကိုတိုးကားပေါ်တွင်သာဖြစ်လေသည်။ခါတိုင်းလိုပင် လူရှင်းသော်လည်းကားအသွားအလာမပြတ်သောလမ်းဘေးတစ်နေရာ တွင်ပွေ့ဖက်ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့ကြရာမှနှစ်ဦးစလုံးအရှိန်တက်ကာလွန် ကုးမိခြင်းဖြစ်လေသည်။ကားကလည်းမှန်အမဲနှင့်မို့လွတ်လပ်တာ ကြောင့်လည်းပါသည်။ထိုစဉ်ကစိုးစိုးတစ်ယောက်ကိုယ်ဝန်တားဆေးများဝယ်သောက်ခဲ့ရသော်လည်းရေရှည်စွဲသောက်ရန်မသင့်တော်သဖြင့် သားအိမ်အတွင်ကြေးကွင်းထည့်၍ ကာကွယ်ထားရလေသည်။ အခုတော့ နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကာလအတွင်းသူတို့နှစ်ယောက်ပုံစံ မျိုးစုံဖြင့်လိင်ဆက်ဆံဘူးကြလေပြီ။အပြာကားများ အပြာစာအုပ်များ ထဲမှတွေ့ဘူးကြာဘူးဖတ်ဘူးသည့်ပုံစံများအတိုင်းဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ် ဆက်ဆံဘို့ပုံစံအသစ်မကျန်တော့သလောက်ပင်ဖြစ်နေ လေပြီ။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း လိင်ဆက်ဆံရာမှရရှိသောကာမအရ သာကိုတနေ့ထက်တနေ့ပိုမိုစွဲလန်းနှစ်ခြိုက်လျက်ရှိနေကြပေပြီ။တဖြေး ဖြေးနှင့်ရင်ထိတ်သည်းဖိုခံစားကာ ကာမဆက်ဆံရသည်ကိုလည်းသ ဘောကျလာကြသည်။ဥပမာ- […]
Posted on October 18, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)
သူငယ်ချင်းမလေးhotwife(ရေးphoenixtun) “နင့်ဟာကြီးကလည်း ကြည့်ပါဦး တောင်နေတာမာပြီးရှည်တယ်” ပန်းခြံထဲ၌ပုံ့ပုံကမြင့်အောင်၏ လီးတံကြီးကိုဆော့ကစားရင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ပုံ့ပုံ့နှင့်မြင့်အောင်မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပြီးမတ်ဆင်ဂျာ၌ ပုံ့ပုံ့တောင်းဆိုလို့ဖြစ်စေ မြင့်အောင်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စေ အောကားတွေ အောအကြောင်းတွေအပြန်အလှန်ပြောဆိုရလောက်အောင်ခင်မင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ပုံ့ပုံ့မှာလင်ရှိမယားဖြစ်ပြီးမြင့်အောင်မှာ လူလွတ်ဖြစ်သည်။နှစ်ယောက်လုံး၃၂ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးမြင့်အောင်ကလပိုင်းငယ်သည်။ပုံ့ပုံ့မှာလင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားမရတိုင်းမြင့်အောင်ကိုအကြံတောင်းကြည့်ရင်းမြင့်အောင်လည်းသူသိသောဆေးဝါးတွေအပြုအစုတွေပြောပြတတ်၏။နောက်ဆုံးအဆင်မပြေမှသူကြည့်ဖူးသောcuckoldကားတွေထဲကလိုhotwifeသဘောတရားတွေပြောပြပေးလိုက်သည်။ “နင့်ယောကျာ်းကိုစည်းရုံးတာအဆင်ပြေသွားပြီလား” “အင်းပြေလို့ ခုလိုနင်နဲ့လာတွေ့တာပေါ့” “တော်တော်စည်းရုံးလိုက်ရမှာပေါ့” “မဟုတ်ပါဘူး။သူက ပန်းညိုးနေတာကော လုပ်တိုင်းလည်းငါကကောင်းကောင်းမခံစားရသေးခင်သူပြီးနေပြီဖြစ်နေတာကော ကိုနင်ပြောသလိုပြောကြည့်တာပေါ့ ဆန္ဒမပြည့်တာကြာလာရင် ငါလည်းသူကပ်တာခံချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး သူမသိအောင်လည်းလုပ်ချင်လုပ်မိမှာ အဲ့တော့သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြ တစ်ခါတစ်လေ ဆန္ဒအရ သူစိမ်းယောကျာ်းနဲ့ဆက်ဆံမိပေမယ့်သူ့အပေါ်မှာအချစ်လျော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်း သူလည်းဆန္ဒအရခရီးသွားရင်းတခြားကောင်တွေနဲ့ပလူးမိတာကိုလည်းငါကနားလည်ပေးတဲ့အကြောင်း ညှိယူရတာပေါ့” “အင်း…သူကောဘာပြန်ပြောလဲ” “သူ့ကြောင့်ငါဆန္ဒမပြည့်တာတွေကိုနားလည်ပေးပါတယ်တဲ့။သူ့အပေါ်အချစ်မလျော့ရင်လည်းကျေနပ်ပါတယ်တဲ့။သူ့နောက်ကွယ်မှာမဖောက်ပြန်ပဲခုလိုသူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသဘောထားတောင်းခံတာကျေနပ်ပါတယ်တဲ့။တစ်ခါတစ်လေမိန်းမဆန္ဒရှိလို့စိတ်ချရသူဆိုကိုယ်ခွင့်ပြုပါတယ်တဲ့” “အင်း နင့်ယောကျာ်းကသဘောထားကြီးပြီးနင့်ကိုအရမ်းချစ်လို့ခုလိုနားလည်ပေးနိုင်တာနေမယ်” “အင်း…ဟုတ်မယ်….အယ်…ကြည့်ပါဦးနင့်ဟာကြီးက ပိုမာလာပြီးအရည်ကြည်တောင်ထွက်နေပြီ” “နင့်လက်လေးတွေကနူးညံပြီးပွတ်သပ်နေတာအရမ်းခံလို့ကောင်းတာကိုး…။နင့်နို့ကြီးတွေကလည်းအကြီးကြီးပဲ နင့်ယောကျာ်း အပီကိုနယ်ဖတ်ထားမှာပဲ” “အင်း” “နင့်နို့ကြီးတွေငါကိုင်ကြည့်မယ်နော်” “ကိုင်လေ” ပုံ့ပုံ့လည်းရင်ဖုံးကြယ်သီးလေးတွေဖြုတ်ပေးလိုက်သောအခါ ဘရာစီယာအောက်၌မို့မောက်ဖုထစ်နေသောနို့အုံကြီးကိုမြင့်အောင်ကအငမ်းမရငုံ့ကြည့်ပြီးသူ့လက်ဝါးကြီးဖြင့်အုပ်ကိုင်ကာဖွဖွလေးဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ချေလိုက်သည်။ “အား….ငါ့စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးပဲမြင့်အောင်ရယ်…” “ဖီလင်တက်လာပြီလား” “အင်း” မြင့်အောင်လည်းပုံ့ပုံ့၏ပါးလေးကိုရွှတ်ခနဲနမ်းလိုက်ပြီးပုံ့ပုံ့၏ခေါင်းကိုသူ့ဖက်အသာအယာဆွဲလှည့်လိုက်သည်။ပုံ့ပုံ့လည်းအလိုက်သင့်လှည့်ပေးပြီးမျက်လုံးလေးပိတ်ထားလိုက်သည်။မြင့်အောင်လည်းပုံ့ပုံ့အိအိစက်နူးညံသောနှုတ်ခမ်းလေးပေါ်အကြင်နာအနမ်းလေးတွေတပြွတ်ပြွတ်ပေးရင်းနို့အုံကြီးကိုဆုပ်နယ်ပေးလိုက်သည်။ပုံ့ပုံ့လည်းအလိုက်တသိပင် မြင့်အောင်၏လီးတံကြီးကိုပွတ်သပ်ဆော့ကစားရင်းဂွင်းထုပေးလေသည်။ “အု..အူး…ကောင်းလိုက်တာပုံ့ပုံ့ရာ…ငါမနေနိုင်တော့ဘူး ဒီနားကဟော်တယ်တခုခုသွားရအောင်” “အင်း..သွားလေ” ##### ဟော်တယ်ခန်းထဲရောက်သောအခါ…. “နင်ခနစောင့်ဦး..ငါအိုက်လို့ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်” ဟပုံ့ပုံ့ကပြောပြီးအဝတ်အစားလဲကာရေချိုးတဘက်လေးဖြင့်ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားသည်။မြင့်အောင်လည်းရေခဲသေတ္တာထဲမှဘီယာတစ်ဗူးထုတ်သောက်ရင်းဖုန်းထဲမှာ wife […]
Total visitors : 32,543
Total page view: 115,437